Vaovao - Torohevitra hialana amin'ny loza aorian'ny oram-baratra sy tondra-drano!
Jereo indray! Nanomboka tamin'ny 08:00 ny 20 ka hatramin'ny 06 Jolay ny 21 Jolay 2021 dia nisy oram-baratra mahery tany afovoany sy avaratry Henan, ary nisy oram-baratra mahery (250-350 mm) nitranga tany amin'ny faritr'i Zhengzhou, Xinxiang, Kaifeng, Zhoukou, Jiaozuo, sns. Ny faritra eo an-toerana Zhengzhou dia 500 ～ 657 mm; ny rotsak'orana betsaka indrindra isaky ny faritra voalaza etsy ambony dia 50-100 mm, ary ny orana be indrindra ora any amin'ny tanànan'ny Zhengzhou dia 120-201.9 mm (16-17 amin'ny 20); Zhengzhou, Xinxiang, Kaifeng, Zhoukou, Luoyang ary toerana hafa ao Henan dia 10 ny mpanaramaso meteorolojika nasionaly manana rotsakorana isan'andro mihoatra ny sanda ara-tantara farany hatramin'ny nanoratana ny toetr'andro. Nanomboka tamin'ny 12 ora tamin'ny 2 aogositra dia olona 302 no maty ary olona 50 no tsy hita popoka tamin'ilay tondra-drano mahatsiravina.
Ahoana no hiatrehana ny oram-baratra sy ny tondra-drano? Angony ity torolàlana momba ny fanampian-tena ity hisorohana ny loza ary hamonjy ny ainao amin'ny fotoan-tsarotra!
Fanavotana samirery ho an'ny besinimaro ivelan'ny tanàna sy an-tanàn-dehibe ary ambanivohitra
Rehefa misy onja mahery mikoriana ao amin'ilay faritra tazomina dia tokony hotsaraina avy hatrany raha nisy ny loza tamin'ny tondra-drano. Rehefa heverina fa misy ny loza amin'ny tondra-drano, dia aza manalavitra:
Mitadiava tany avo azo antoka
1. Ny faritra ambonin'ny rihana faha-2 (ambonin'ny ambonin'ny rano) kianja avo sy trano malalaka misy rihana marobe misy rihana maro.
2. Sorohy ny fisorohana loza amin'ny tetezana, indrindra ny tetezana amin'ny renirano, satria mety handroaka ireo tetezana ny tondra-drano.
Aza miditra amin'ny faritra mampidi-doza
1. Halaviro ny toerana fanaraha-maso ny tondra-drano toy ny renirano. Ny tondra-drano mahery vaika dia mety handrava ireo vatomamy na hanafotra azy ireo.
2. Aza miditra amin'ny faritra ambanin'ny trano mba hisorohana ny rano amin'ny tany.
3. Aza miditra amin'ny metro sy ny fotodrafitrasa hafa.
4. Aza miditra amin'ny lavarangana any ambanin'ny tany, tionelina eny an-dalambe, sns.
5. Aza miditra amin'ny tetik'asa fiarovana ny rivotra ambanin'ny tany.
6. Aza miditra amin'ny arabe fiantsenana ambanin'ny tany.
7. Aza manakaiky ny tranobe taloha.
8. Manalavitra ny sisin'ny havoana, be loatra ny orana mety hiteraka loza faharoa, toy ny fihotsahan'ny fotaka.
9. Aza mijanona eo ambanin'ny hazo na eo akaikin'ny hazo, ary aza manakaiky ny takelaka fanaovana takelaka.
10. Aza mijoro eo amin'ny fidinana na ao ambadiky ny fiara. Ny rano dia mirohondrohona na koa ny fiara aza mamely rano, izay tena hampidi-doza.
11. Aza manao kapa na kapa na kiraro, avelao tsy hitondra kapa, fa mora ratra ary solafaka rehefa milomano.
Aza mampiasa fitaovam-pitaterana rehefa avy ny orana
1. Aza mitondra fiara amin'ny fiara. Ao ambanin'ny oram-be dia rakotra tanteraka ny fepetra eto an-tany ary tsy azo atao ny mitsara marina ny fanangonana rano. Raha vao mizotra mankany amin'ny tany ambany dia mampidi-doza tokoa.
2. Avelao haingana ny tobin'ny fitateram-bahoaka. Mandritra ny oram-be, mampidi-doza ihany koa ny tobin'ny fitateram-bahoaka. Na bus, metro, taxi, na lalamby hafainganam-pandeha haingam-pandeha aza, dia mety ho tapaka izy ireo. Mampidi-doza tokoa ny metro mijanona ambanin'ny tany sy ny bus ao amin'ny faritra iva. Avelao ny fitaterana. Mitadiava toerana azo antoka.
3. Raha miala amin'ny fiara ianao, dia tsara kokoa ny mitazona hetsika iombonana. Ny fiara iray manontolo dia tokony esorina miaraka, ary tsara kokoa ny mifanome tanana mba hiantohana fa tsy misy olona tavela ao aoriana.
4. Ao ambanin'ny oram-be, rehefa mitady toerana azo antoka ianao, aza maika ny miantso, mandefa fotoana amin'ny fotoana fohy, manao selfie, milalao telefaona sns. Mety hanimba ny telefaona finday ny ranonorana ary handany ny bateria aloha loatra, ary ny vokany dia mety ho lehibe.
5. Mitadiava toerana avo ary ampiasao ny telefaona hifandraisana amin'ny tontolo ivelany raha toa ka miantoka ny fiarovana anao manokana ianao.
Halaviro ireo fitaovana elektrika
1. Eo am-panaovana ny fisorohana loza, aza hadino ny manalavitra ireo fotodrafitrasa herinaratra, tsipika misy herinaratra avo lenta, tilikambo avo lenta, mpanova ary zavatra rehetra misy fambara loza mety hitranga.
2. Halaviro ny tariby sy ny zavatra toy ny tady.
3. Halaviro ny boaty switch sy ny boaty fizarana.
4. Aza mikasika ny sockets, switch ary fitaovana mivantana hafa rehefa tsy azonao antoka hoe maina ny vatanao sy ny tananao.
5. Aza atao hijoro amin'ny toerana avo eny ivelany mba hisorohana ny fitokonana.
1. Rehefa ao anaty alahelo any ivelany ianao dia tsy maintsy miantoka fa ny telefaona findainao dia afaka manohana ny fahatongavan'ireo mpamonjy voina ary miantoka ny fahafahanao mifandray amin'ireo havana aman-tsakaiza aorian'ny fiarovana anao mba hahafahanao mitsitsy herinaratra!
2. Rehefa mandao ny fiara ianao dia afaka mandefa hafatra amin'ireo havanao sy namanao, na WeChat na Moments, dia asio marika ny toerana misy anao, ny toerana misy ny fiara, ny drafitra famindrana anao avy eo, ary avy eo mifindra toerana miaraka amin'ny rehetra.
3. Rehefa tonga amin'ny toerana azo antoka ianao dia mandefasa hafatra hafa hanamarihana ny toerana misy anao ankehitriny sy ny toe-javatra misy ny olona manodidina anao, hampandre ny rehetra fa voaro vonjimaika ianao, ary hamonjy herinaratra dia hampihena ny fifandraisanao amin'ny any ivelany.
4. Raha nanakana anao tsy hiala ny toe-javatra manodidina ny rano dia afaka manao tatitra avy hatrany any amin'ny polisy ianao hoe aiza ianao, firy ny olona, ​​ny toetoetran'ny rano manodidina, ny fomba fifandraisana maika, sns, ary ajanony ny fampiasanao ny telefaona findainao miandry famonjena.
5. Raha toa ka manohana anao ny finday ny tontolo manodidina anao, na raha manana banky herinaratra misimisy ianao dia azonao atao ny mampandoa azy eo noho eo, saingy mampihena ny fampiasana findainao.
6. Raha azo atao, hamafiso ny fiarovana ny havana aman-tsakaizanao, ary omeo torolàlana ilaina amin'ny havany sy ny namany, ary angataho izy ireo hitsitsy herinaratra.
7. Rehefa avy nahazo havana aman-tsakaiza hahatratra toerana azo antoka ianao, dia ekeo ny drafitry ny fifandraisana ambany ambany izay mifampiresaka isaky ny 2-4 na mihoatra ny fotoana hampihenana ny fifandraisan'ny fifandraisana.
8. Eo ambanin'ny toe-java-doza, mety ho tapaka ny herinaratra manodidina sy ny famantarana, ary mety hisy ny fifandraisana afovoany ho an'ny vahoaka manontolo, izay mety hiteraka fitohanan'ny fambara. Aza mikoropaka rehefa sendra toe-javatra toy izany. Miezaha hifandray amin'ny departemantan'ny fiarovana ny daholobe mba hampahafantatra anao ny olanao ary miandry ny fanampian'ny governemanta.
9. Raha manana radio ianao dia afaka mampiasa radio handrenesana ny vaovao navoakan'ny governemanta.